Ogaden News Agency (ONA) – Qurbajoogtii lagu yidhi kaalaya soo arka dalka oo dhibaatada gumaysiga la kulmay iyagiina
Qurbajoogtii lagu yidhi kaalaya soo arka dalka oo dhibaatada gumaysiga la kulmay iyagiina
War xog-ogaal ah oo naga soo gaadhay dad ka mid ah eheladii muwaadinkan gobolka qoraxay ayaa noo xaqiijiyey Cabdi maalik Gaboose oo ka tagay Demark magalada madaxa da copenhagen asaga iyo darawal u waday gaadhigiisa si aad ah loogu jidhdilay magalada Qabaridahare. Wararka ayaa intaa waxay
ku darayaan in jidh dilkan ay ka dambaysay kolkii ciidamada Wayaanu ay isku dayeen inay gaadhigiisa si qasab ah uga kaxaytaan.
Waxaa la sheegayaa inuu darawlkii gaadhiga oo magaciisa naloogu sheegay Khadar Nuur Halaq uu diiday ka dibna si foolxun oo aadminimada ka baxsan inta loo garacay loo taxaabay jeelka. Cabdimaalika oo iskudayey inuu soo ceshado gaadhigiisa, darawalkana ka soo daayo ayaa nasiibdaro sidii dhaqanka u ahayd gumeysiga ay asagiina ku dareen ka dib markii sida la sheegayo ay afkiisa ka soo yeedhay; “war gaadhigeyga dawaladi malahee kuwiina kaxeesta wiilkana noo soo daaya.” Wuxuu islahaa Cabdimaalik waa dal sharci leh oo qofka la ixtiraamo sida dalkii uu ka yimid ama loogu soo sheekeeyay.
Wuxuu isku dayey sida ay sheegeen eheladiisa inuu diido xabsiga sharcidarada ah hasa ahaatee ciidankii meesha joogay ayaa halmar gacanta saarey waxaana lala dhacay qoriga dabadiisa iyo wax walba oy gacanata ku hayeen. Waxaa soo gaadhay Cabdimaalik burbur baahsan oo madaxa iyo jidhka dhamaantiiba ah.
Cabdimaalik ayaa ka mid ahaa dadkii loogu magaca daray qurbajoogta ee xafiiska gumeysiga Ogadenya maamula ay dhaheen nabadgaliyaa jirtee kaalaya oo maal gashada. Cabdimaalika ayaa reerkiisa iyo eheladiisa ay daganaayeen magalada Qabaridahare.
Cabdimaalika ayaa hadda loosii qaadayaa dhakhtar ku yaala magaalada Adisababa ka dib markii ay xaaladiisa caafimaad sii xumaatay.
kolay aad ayaan uga xumahay laakiin waxa wanaagsan in uu ku cibra qaato oo uusan mar dambe asaga iyo inta la mid ka ahba ayna u laaban arinkan oo kale
waa waajibaadkiisii uun wax kale lama yeelin
waa wax laga naxo wiilyaro dhalinyaro ah ah oo dalkiisii tagay in dhib loo gaysto bilaashna lagu maago lakiin nadaamka mesha ka jira ayaaba sidaas ah. waxan kale oon ognahay in uusan qurbajoogtii ahayn wiilkani lakiin uu si privat ah u tagay dalka iyo qaraabo salan. mana haboona sida wiil wardheer dhib ku dhacay qof shacab ah oodan waxbadan ka ogayn in aad ku digato ood dhahdo waa wajib .
Lax walba god key isdhigtaa lagu qalaa. Qorahey waxba wiil wardheer ha aflagaadeyn lana soco in ayna falaadhi gilgilasho kaaga hadheyn.
Dabo qoodhi ayuu ahaa, waxna yaan laga nixin
waxaana fiicneeyd in rape loogu daro sida ay gabdhaha ku sameeyaan
koley kuwa dafiro ee dhaho dumar lama rape gareeyo soo ka mid muuna ahayn
Waan ka xumahay sxb c/maalik iskaga carar meesha